निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एफएनसीसीआई र नेपालको अग्रणी अनलाइन बजार दराजले नेपाल बीच एक समारोहका बीच महासंघ सचिवालयमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । यो सम्झौतापत्रले महासंघसँग जोडिएका साना तथा मझौला ( SME ) उद्धमीहरुलाई एकीकृत गरि उनीहरुका उत्पादन्लाई दराज मार्फत बिक्रीबितरन कार्य गर्नेछ ।
एफएनसीसीआई महासंघसँग र दराज नेपाल बीच भएको सम्झैाता अन्तर्गत दराजमा दर्ता हुनुभएका साना तथा मझौला ( SME ) उद्धमीहरुले पुरा एक बर्ष (जनवरी २०२२ देखी दिसेमबर २०२२) सम्म दराजमा 0% बजार शुल्कमा ब्यापार गर्न पाउनुको साथै अतिरिक्त सुबिधा हरु समेत पाउनुहुनेछ ।
त्यसैगरी सम्झैाता अनुसार साना तथा मझौला ( SME ) उद्धमीहरुलाई आफ्नो व्यापार बृद्धी गर्नको लागी सही शिक्षा र सीपहरु पनि दराजले प्रदान गर्नेछ । एफएनसीसीआई र दराज बीचको यो सम्झैाताको मुख्य उद्देश्य नेपालका विभिन्न शहरहरूमा रहेका साना तथा मझौला उद्धमीहरुलाई आफ्नो व्यापार अनलाइन सुरु गर्न सहयोग गर्ने हो।यस सम्झौत बाट साना तथा मझौला ( SME ) उद्धमीहरुलाई व्यवसयिक सफलता हासिल गर्न खाँचो हुने सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
दर्ता कसरी गर्ने ?
>> https://bit.ly/3qJDZcj मा click गर्नुहोस ।
>> “Local Seller” विकल्प छान्नुहोस् ।
>> आफ्नो मोबाइल नम्बर, इमेल र अन्य विवरणको साथ दर्ता पूरा गर्नुहोस्।
>> Promocode "FNCCIO22" प्रयोग गर्न नबिर्सनुहोला्
बिस्तृत जानकारीको लागी Daraz प्रतिनिधिलाई 9801114108 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।धन्यवाद।
दर्ता गर्न के-के चाहिन्छ ?
Daraz मा व्यवसाय दर्ता गर्न तपाईको व्यवसायको PAN वा VAT को प्रतिलिपि र बैंक चेकको प्रतिलिपि मात्र भए पुग्दछ । https://bit.ly/3qJDZcj यो लिङ्कमा क्लिक गरेर आफ्नो मोबाईल नम्बर र ईमेल सहितको जानकारी राखी सजिलै दर्ता गर्न सकिन्छ ।
दर्ता पछिको प्रकृया के हुन्छ ?
तपाईले दर्ता गर्नु भएपछी Daraz टीमले थप प्रकृयाको लागि तपाईहरुलाई सम्पर्क गर्ने छ ।
Daraz सम्बन्धि Online Training, पहिलो पल्टको Packaging material, सामानहरुको Photoshoot सबै Daraz को तर्फ बाट नि:शुल्क प्रदान गरिने छ ।
नोट : दर्ता गर्दा Promocode को ठाउँमा FNCCI022 प्रयोग गर्न नबिर्सनुहोला ।